September 9, 2020 4106
कुनै पनि आमा’का लागि आफ्ना सन्ता’न जति प्यारो हुन्छन् ।बालबालि’काहरुका लागि आमाबाबु पनि उत्तिकै प्यारा लाग्छन् । हालै चीनमा भएको सडक दुर्घटनामा एक बालकले देखा’एको आक्रोशले उनी आमाप्रति कति मा’या गर्ने रहेछन् भन्ने देखाउँछ ।
सडक पार गर्दै गरेको अवस्थमा का’रले आमालाई ठक्कर दिएपछि ती बालकले बीच सडकमा कारमाथि ला’त्ती प्रहा’र गरे । उक्त भिडियो अहिले सामा’जिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
चीनको दादुकू जिल्ला’स्थित चोंगकिं’गमा एक महिला आफ्नो सानो बालक छोरा’संग सडक पार गर्दै थिइन् । यत्तिकैमा पछा’डिबाट आएको कारले ति महिला’लाई ठक्कर दियो ।
कारको ठक्क’रका का’रण उनि सड’कमा पछारिइन् । आफ्नी आमालाई कारले ठक्कर दिएपछि ति बालक निकै आक्रोशित बने । उनले कारलाई एकाएक लात्ती प्रहा’र गरी आफ्नो रीस पोखे । हुनत आमासं’गै ति बालक पनि सडकमा लडेका थिए ।
सी’सीटीभी क्यामे’रामा कैद भएको भिडि’यो आ’मासंगै लडेका ती बालक आफ्नो पर्वाह नगरी हतारहतार आमा’लाई उठाउँछन् । आमा ठिकै छिन् भन्ने आभाष भए’पछि उनि कारतर्फ अघि बढ्छ’न् र कारमा जोडका साथ लात्तले हिर्काउन थाल्छन् । यतिकैमा ड्रा’इभर पनि कार बाहिर निस्किन्छन् । त्यसपछि बालक रुदै फेरी आमा भ’एतर्फ जान्छन् ।
ड्राइभरले आफ्नो’ गल्ती स्वि’कार्दै जम्मा भएका मानिसको सहायतामा घाइते महि’लालाई कारमा बसाउछन् र अस्प’ताल लान्छन् । ति बालक पनि आमाको साथ कारमा बसि अस्प’ताल जान्छन् । अहिले बच्चा र आमा दुबै सकुशल रहेको जनाइ’एको छ ।
उक्त भिडियो भा’इरल बनेप’छि अधिकाशंले ति बालकको प्रशंसा गरेका छन् । बालकले पहिला आमाको अवस्था बुझेर प्रतिकि’यात्मक आक्रोश पोखेकोमा उक्त बाल’कको बहादुरी’लाई धेरैले स्रहाना गरेका छन् । – खबर हान
Prevप्रेम प्रस्ताव राख्नका लागि शरीरमा आ’गो लगाइयो ! (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextबढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्…
काठमाण्डौमा हुने कार्यक्रमका लागि सलमान खानले लिँदैछन् यति धेरै पारिश्रमिक
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81119)